Gcina Ukukhishwa Kwabezindaba kusu Lakho Lokukhangisa ngo-2009 | Martech Zone
Gcina Ukukhishwa Kwabezindaba kusu Lakho Lokumaketha ngo-2009
NgoLwesine, Januwari 29, 2009 Douglas Karr
Umngani omuhle uLorraine Ball, ogijima i- I-ejensi yezentengiso yase-Indianapolis ebizwa ngeRoundpeg, usebenze nami ngonyaka odlule kumakhasimende ambalwa. Esinye sezifundo zami engisifunde kuLorraine ukufinyelela okumangalisayo okutholwa yimithombo yezindaba. Kuyamangaza ukuthi zingaki izindawo ezishicilela kabusha ukukhishwa - nokuthi zingaki ezigcina zingena kumabhulogi. Lokhu kungaba kukhulu ekuxhumaniseni i-backlink, igunya, nokuthola igama enkampanini yakho.
Mhlawumbe okuphawuleka kakhulu ukuthi akudingeki ulinde umcimbi omkhulu ukwenzeka enkampanini yakho ukushicilela ukukhishwa kwabezindaba. Okuthile okulula njengesimemezelo se-webinar noma isifundo secala esisha kuyinto enhle kakhulu! Ungaphunguli ukukhishwa kwabezindaba isu lakho lokumaketha ngo-2009. Ngenxa kaScott Whitlock ku- I-Flexware Innovation, inkampani yezobuchwepheshe yokukhiqiza. UScott ungishiyele inothi ngibuza ngezitolo ze-PR ebengizincoma phambilini futhi ngacabanga ukuthi kuzokwenza okuthunyelwe okuhle kwebhulogi.
Lezo zitolo zikhona I-PRWeb futhi QHUBEKA uma ungumkhangisi ozenzela yona. Ukukhishwa Kwezindaba Zokubhala kuyindlela encane yobuciko uma ufuna ukuthi bathole imilenze, noma kunjalo. Shayela uLorraine uma udinga usizo lapho!
Tags: i-coca-colaamazinga wokuguqulwaokudayisai-kern
Ukumaketha ngenjongo, hhayi ama-eyeballs
Feb 1, 2009 ngo-11: 59 AM
Siyabonga ngesixhumanisi nenothi uDoug. Sizobe sikhulisa ukusetshenziswa kwethu kwezentengiso ezenziwa online kulo nyaka. Usizo lwakho kimi belungakholeki!
Feb 14, 2009 ngo-3: 40 PM
Siyabonga ngesixhumanisi .. Ok, ngakho-ke ngikuphuthe kanjani? Kumele ngabe ulele esondweni. Ividiyo enhle futhi!